Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Costa Rica » Mitaky porofo momba ny vaksiny COVID-19 izao i Costa Rica
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Costa Rica • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny orinasam-barotra rehetra ao Costa Rica dia mitaky porofo momba ny vaksiny COVID-19 ho fiarovana ny mponina ao an-toerana sy ny mpitsidika, manomboka ny 8 Janoary 2022.
Ny mpitsidika rehetra, na firy taona na firy taona na firy taona, dia tsy maintsy mameno ny taratasy elektronika HEALTH PASS, fara fahakeliny, 72 ora alohan'ny diany.
Ireo izay voan'ny tsimokaretina dia tsy maintsy mametraka ny "Karatra firaketana an-tsoratra momba ny vaksiny COVID-19" amin'ny taratasy ary hahazo kaody QR manokana izay azon'izy ireo ampiasaina hidirana amin'ny orinasam-barotra ao amin'ny firenena.
Manomboka ny 1 desambra 2021 ka hatramin'ny 7 janoary 2022, hisy ny fe-potoana tetezamita ahafahan'ny orinasam-barotra mandray olona tsy misy fandaharam-potoanan'ny vaksiny feno, raha toa ka miasa amin'ny fahafaha-manao 50%.
Manomboka ny 8 janoary 2022, ny toeram-pivarotana rehetra ao Costa Rica dia mitaky porofo amin'ny vaksiny COVID-19 ho fiarovana ny mponina ao an-toerana sy ny mpitsidika. Ny porofon'ny vaksiny dia tsy maintsy hamarinina amin'ny alàlan'ny kaody QR na "Karatra firaketana momba ny vaksiny COVID-19", ary mihatra amin'ny olona rehetra 12 taona no ho miakatra. Ny trano fandraisam-bahiny dia ahitana hotely sy toeram-pisakafoanana, trano fisakafoanana sy trano fisotroana, serivisy fizahan-tany fizahan-tany, casinos, fivarotana, tranombakoka, gymnasium, ary akademia momba ny zavakanto sy dihy. Ny serivisy ilaina, toy ny fivarotana enta-madinika sy fivarotam-panafody, dia tsy mitaky porofo momba ny vaksiny COVID-19.
Manomboka ny 1 desambra 2021 hatramin'ny 7 janoary 2022, hisy ny fe-potoana tetezamita ahafahan'ny orinasam-barotra mandray olona tsy misy fandaharam-potoanan'ny vaksiny feno, raha toa ka miasa amin'ny fahafaha-manao 50% izy ireo. Ny orinasa izay misafidy ny hiasa amin'ny fahafaha-manao 100% dia tsy maintsy mitaky porofo momba ny vaksiny COVID-19.
Costa RicaNy fepetra takiana amin'ny fidirana dia mitoetra toy izao manaraka izao:
Ny mpitsidika rehetra, na firy taona na firy taona, na inona na inona sata vaksiny, dia tsy maintsy mameno ny taratasin'ny HEALTH PASS elektronika epidemiolojika farafahakeliny 72 ora alohan'ny diany. Ireo izay voan'ny tsimokaretina dia tsy maintsy mametraka ny "Karatra firaketana an-tsoratra momba ny vaksiny COVID-19" amin'ny taratasy ary hahazo kaody QR manokana izay azon'izy ireo ampiasaina hidirana amin'ny orinasam-barotra ao amin'ny firenena.
Ireo mpitsidika izay vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 sy ny zaza tsy ampy taona latsaky ny 18 taona dia afaka miditra ao amin'ny firenena tsy misy fiantohana fiantohana dia hatramin'ny 7 janoary 2022. Manomboka ny 8 janoary, ny fanavotana ny politikan'ny fiantohana dia tsy mihatra afa-tsy amin'ireo mpitsidika efa vita vaksiny sy zaza tsy ampy taona. latsaky ny 12 taona. Ireo izay tsy vita vaksiny tanteraka dia tsy maintsy mividy fiantohana ara-pitaterana eo an-toerana na iraisam-pirenena izay miantoka ny fandaniana COVID-19 sy ny fanokanan-toerana, raha ilaina.